Tsidiho ny faritra tamin'ny Aprily, Lohataona ao anatin'ny Insight Guides ny hilaza Italiana Lakes diany to stay ahead of the crowds.
The Altstadt (tanana haolo) has some very nice buildings, izay mandry eo am-renirano Rhin. Just next to it is the Cologne Cathedral, ny UNESCO Lova Iraisam-pirenena toerana. Tsy ho very maina ny mananika ao anatin'ny anankiray amin'ireto roa tilikambo.
Cologne dia momba ny rivotra iainana and its people. Ny olona ao an-tanànany Cologne tia. They have their own dialect and quite a few mozika fatorana izay mihira eo an-tanàna ireo fitenim-paritra. Fotoana miborosy ny amin'ny mianatra teny vahiny!